Caseguru | Mobile Products, Accessories, Dib u eegida iyo More ....
Caseguru Products inaad u jeclaataa, Sidoo kale waxaa la heli doonaa on Amazon.com! Posted by : Jay Ali Jay Ali
August 7th, 2015 Leave a comment
Waxaan ku faraxsanahay in aan ku dhawaaqo in Caseguru® waxyaabaha laga heli doonaa dhakhsaha badan ee Amazon.com iyo sidoo kale. Si aad u iibsato ka Caseguru.com si toos ah guji ‘dukaanka‘ link in menu.
25 Common Windows 10 Dhibaatooyinka iyo sida loo dayactir Posted by : Jay Ali Jay Ali
Newz, Talooyin iyo Casharrada, Casharrada
Windows 10 hadda waa la heli tan iyo markii dhowrkii maalmood ee hadda dhammaan iyo users badan ayaa horay warbixinta dhibaato badan la xirxiro, dhawaajiyaan, ammaanka iwm. Post Tani waxay ka hadli doonaa Windows 10 dhibaatooyinka iyo sida loo hagaajin.
Samsung Galaxy ee Next casriga ah waxaa lagu dhawaaqi doonaa 13-ka August Posted by : Jay Ali Jay Ali
July 28-, 2015 Leave a comment
Samsung Galaxy ee Next casriga ah waxaa lagu dhawaaqi doonaa 13-ka August
Haddii ay dhacdo Samsung Unpacked waxaa oo dhan qarka u August 13 Magaalada Lincoln Center New York. Munaasabadan ayaa waxaa ka furmay garoonka 11 a.m. Eastern, iyo albaabada furan 10 a.m. (Sida had iyo jeer, CNET dhacdo dabooli doonaa nool.) Read More
OnePlus 2 Liiska Boos hore u furan Posted by : Jay Ali Jay Ali
July 25-, 2015 Leave a comment
Qalabka, News Latest
OnePlus 2 Yeedhi
Furi OnePlus liiska diiwaangelinta ah yeedhi inaad iibsato ah OnePlus 2. Waxaan rajeynayaa, aad aragtay daqiiqadii dhajinta ka dib live tageen, sababtoo ah liiska hore ayaa ku dhow 20,000 dadka. Read More
Xaaladaha ugu fiican ee Samsung Galaxy Note 5 Posted by : Jay Ali Jay Ali
24-kii July, 2015 Leave a comment
Fiiro: The Note Samsung Galaxy 5 waxaa la muujin doonaa 12 August. Ka dib waxa uu shaaca ka qaaday, qalab laga heli doonaa oo dunida dacaladeeda ah ka August 21 on sidayaal badan. Post Tani waxay si joogta ah u la cusbooneysiin doonaa sida xaaladaha cusub ee ka dhacay suuqa. Read More
Next Xirmaan Caseguru
Talooyin iyo Casharrada(1)
Popular Recent iPhone 7 Si aad u Noqo iPhone Thinnest ayaa Ever
June 20-, 2015 Macruufka 9 U dhigi karaan iPhone by dhawaad 40% si ay u tuuji More Battery Life.
June 26-, 2015 15 Dhibaatooyinka la Edge Samsung Galaxy qod6 / qod6 – Sidee inuu dayactirka ku dhameeyo
July 4-teedii, 2015 iPhone 6S yeelan doontaa shaashad aad riixi kartaa!, kaamirooyinka fiican iyo war nolosha batari weyn
June 19-, 2015 Caseguru Products inaad u jeclaataa, Sidoo kale waxaa la heli doonaa on Amazon.com!
August 7th, 2015 Caseguru Products inaad u jeclaataa, Sidoo kale waxaa la heli doonaa on Amazon.com!
August 7th, 2015 25 Common Windows 10 Dhibaatooyinka iyo sida loo dayactir
August 3rd, 2015 Samsung Galaxy ee Next casriga ah waxaa lagu dhawaaqi doonaa 13-ka August
July 28-, 2015 OnePlus 2 Liiska Boos hore u furan
July 25-, 2015 Xaaladaha ugu fiican ee Samsung Galaxy Note 5
24-kii July, 2015 Olga Anna: Aad ayaad u mahadsantahay Jay ALI, by article in ay ahayd mid aad muhiim u ah d ..
Jay Ali: Taasi waa weyn ! mahadsanid ..
solidworks: Waad ku mahadsan tahay video Waxaan u baahanahay IOS9 batari badbaadiyo ..
VJY: u dhakhsaha badan u hesho BbY ............... ..
Basir: Waxaan iphon lova 7 ..